आदित्य र नेहा को विवाह चर्चा चुलिए संगै उदित नारायण झाले दिए यस्तो अभिब्यक्ति, अब के होला ? - Tufan Media News
आदित्य र नेहा को विवाह चर्चा चुलिए संगै उदित नारायण झाले दिए यस्तो अभिब्यक्ति, अब के होला ?
७ माघ २०७६, मंगलवार १७:१९
काठमान्डौ|यतिबेला भारतीय सञ्चारमाध्यममा गायक उदितनारायण झाका छोरा आदित्यनारायण झा र गायिका नेहा कक्करबीचको विवाह चर्चा चुलिएको छ। ‘इन्डियन आइडल सिजन-११’ मा निर्णायकका रूपमा रहेकी कक्कर र होस्टका रूपमा रहेका आदित्यको विवाह चर्चा चुलिएको हो। उनीहरूले कार्यक्रमको स्टेजमा देखाउने हाउभाउ र विभिन्न एपिसाेडमा भएका गतिविधिका आधारमा यस्तो चर्चा सुरु भएको हो।
विशेष गरेर कार्यक्रमको सेटमा जब होस्ट आदित्यका बुबा उदितनारायण झा, आमा दीपा झा र नेहाका तर्फबाट उनको परिवार उपस्थित थिए । त्यस दिनबाट यी दुईबीच विवाहको चर्चा सुरु भएको थियो। यससम्बन्धमा चौतर्फी गसिप र समाचार बनिरहँदा बुबा उदितनारायणले छोरा आदित्य र गायिका नेहाकाे विवाह चर्चाबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
नवभारत टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा आदित्य र नेहाको सम्बन्धको चर्चाबारे बुबा उदितनारायणले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। छोरा आदित्य र गायिका नेहाबीच विवाहको चर्चा चलिरहँदा तपाईं के भन्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै झाले भनेका छन्, ‘नेहा प्यारी छिन्। उनी निकै मीठा गीत गाउन सक्षम छिन्। उनी मलाई मन पनि पर्छ।’ ‘म उनलाई पक्कै मन पराउँछु, किनकि उनले आफ्नो क्षेत्रमा सफल नाम बनाएकी छिन्। उनका गीत म पनि सुन्छु,’ उदितनारायणले थपेका छन्, ‘आदित्य नेहाको जोडी पनि जमिरहेको छ। बाँकी मलाई केही थाहा छैन। किनकि, यी सबै समाचार टिभीमा चलिरहेका छन्। तर, जे भए पनि यो विवाह भयो भने खुसी हुनेछु। कारण, मेरो घरमा अर्को एक गायिका सदस्यको प्रवेश हुनेछ।’
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जुत्तामेला शुरु भएको छ । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थलमा मेगा विन्टर सुज मेला शुरु भएको हो । उक्त मेलामा नेपालका चर्चित १ हाजर भन्दा बढि मोडलका उपलब्ध रहेको आयोजकले जनाएको छ ।यससँगै मेलामा बिबाह, पार्टी , स्पोर्टस, क्याजुअल, स्कुल तथा कलेज साथै कार्यालयका लागि समेत उपयुक्त हुने जुत्ता चप्पलहरु एकै छानोमुनी पाइने भएको छ ।
भने ग्राहकहरुले जुत्ताचप्पलमा समेत ६ महिनासम्मको वारेन्टी पाउने भएका छन् । साथै मेलामा ग्राहकले खोजे अनुसार तथा विभिन्न डिजाइनका ५ सयदेखि १० रुपैयाँसम्मका जुत्ताचप्पलहरु समेत उपलब्ध हुने आयोजकले जनाएको छ । भने आयोजकका अनुसार मेलामा बिक्रि वितरण गरिने जुत्ताचप्पलमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था समेत रहेको छ । उक्त मेला माघ ५ गतेबाट शुरु भई माघ १६ गतेसम्म चल्नेछ ।